प्राविधिक प्रशिक्षण प्रक्रियामा सामाजिक पक्षको समावेशीकरण
अप्रिल, 2013 शिक्षण CAD / जीआईएस, आराम / प्रेरणा
यो हप्ता म मेरो सहयोगी मध्ये एक संग कुरा गरिरहेको थियो, र हामी ती विकास प्रक्रियाहरु मार्फत खैरो कपाल को बारे मा केहि इतिहास गर्दै थिए -मेरो भन्दा एक भन्दा बढी खान जसले आफ्नो गण्ड समर्थन गर्दछ-.
मैले वर्णन गरे कि मेरो विचलन को विकासले मलाई कलात्मक क्षेत्रबाट ईन्जिनियरिङ्मा उत्प्रेरित गर्न र त्यसपछि सो सामाजिक; सँधै खोजी कसरी टेक्नोलोजी नवाचारमा रहनु हुन्छ। आफ्नो निष्कर्ष मध्ये एक उनले उनले मलाई एक वाक्यांश को सम्झना गरे कि उनले वहाँ पढेको थियो, भविष्य को अनपढीहरु उनिहरु लाई हटाउने र परिवर्तनहरुलाई अनुकूलन गर्न सक्दैनन्।
यदि सामाजिक क्षेत्रमा लाभ छ भने, यो तपाईंले मानिसहरूलाई बुझ्न कसरी बारेमा धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ। चाहे हामी शुद्ध तरिकाले प्राविधिक, प्रशासनिक वा विकास प्रक्रियामा काम गरिरहेका छौं। जान्दछन् कि काम कसरी महत्त्वपूर्ण छ। यस अवस्थामा म शिक्षण-शिक्षण प्रक्रियाहरू सन्दर्भ गर्न चाहन्छु; म एक तरिका को कक्षा मा निबंध को रूप मा म अध्ययन गरेर रहयो हूँ र म एक नियमित रूप मा लेख जहां एक साइट मा एक लेख जोडें।
शिक्षण प्रक्रियाहरूसँग सामाजिक व्यवस्थापन कसरी महत्त्वपूर्ण छ?
यो सम्भव छ कि ईन्जिनियरहरूले खराब शिक्षकहरू अन्त्य गर्न सक्ने कारणहरू छन् किनभने तिनीहरू राम्रो-लागू प्रयोगका केही उदाहरणहरू देख्छन्। मलाई सम्झना थियो डाक्टर प्रोफेसरहरू तर एक गरीब क्षमता प्रसारण गर्न; उदाहरणको लागि, तिनीहरूमध्ये एकलाई अपमानजनक थियो किनभने हामीले उहाँलाई शिक्षक बनायौं।
-योले मलाई ईन्जिनियरिङ्, स्वामी र डटकम प्राप्त गर्न 11 वर्ष लिनुभयो। - उहाँले भन्नुभयो - त्यसैले कृपया मलाई शिक्षक स्तरमा नपठाउनुहोस्।
यी मानसिकताहरूको जन्म भएको एक राम्रो मात्रामा हामी हामीलाई सोचेको जस्तो कि ईन्जिनियरहरू हामी नवाचारको क्षेत्रमा एक कुलीन वर्ग थिए; ज्ञान र मान्यता संग भूमिका भ्रमित। पक्कै अद्वितीय छ भन्ने जानकारी लागू गर्न सिकेका गर्दा पनि कम आत्म-सम्मान र अहङ्कारको तपाईं जीवनको आधा लाग्न सक्छ titulitis संग लुकाएको को मनोवृत्ति unlearn।
त्यसैले ईन्जिनियरिङ् क्षेत्र को प्राध्यापकहरू आफ्नो शैक्षणिक प्रशिक्षण पूरक जिद्दी छैन भने, तिनीहरूले आफ्नो सेवा को ग्राहकहरु रूपमा ज्ञान र विद्यार्थीहरूको उपचार को प्रसारण मा प्रमुख सीमितता हुनेछ। यद्यपि म स्पष्ट हुनु पर्छ कि तिनीहरूमध्ये केही शिक्षकहरू जन्मिएका थिए, र तिनका कुर्सी सजिलैसँग उत्कृष्ट थियो।
अन्त मा, तिनको शिक्षाले प्राविधिक मा राम्रो छ, तर positivist शिक्षण नकारात्मक पक्षहरू र विभिन्न मोडेल रिक्त सिक्ने र सिक्दै कुनै प्रगति थप शिक्षा हेर्न जो व्यवहार मनोविज्ञान लागू गर्दा परम्परागत स्तर यसको स्कोप रहिरहन्छ एक सरल प्रक्रिया हो कि एक प्रक्रिया।
मानिसहरू किन सिक्छन्?
मैले सिकाउँदा मेरो अग्रगामी प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा सुरू भयो AutoCAD पाठ्यक्रम। मलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ कि गल्तीहरू समाप्त भयो, लगभग मेरो ठेकेदारको धैर्यताको रूपमा।
यो एक विधिगत लिपिको निर्माण गर्न र एउटा अन्य कुरा हो कि यो सुनिश्चित गर्न विद्यार्थीहरूको अपेक्षा हाम्रो उद्देश्य अनुसार पूरा हुन्छ। प्रक्रिया complicating कुराहरू बीचमा थिए: गर्नुभएको अघिल्लो संस्करणमा देखि अटोक्याड नयाँ सुविधाहरू जान्नको लागि आवश्यकता पूरा गर्न भर्खरै आउनुभएका विद्यार्थी, तिनीहरूले आय स्रोतको रूपमा यसलाई पछि लाग्न अपेक्षा किनभने अरूलाई लिए, इन्टरनेट संग जवान विचलित मिसिनहरु र वयस्कों जो मुश्किल देखि माउस व्हील को मालिक बना सकते हो।
त्यसोभए अनुभववादीले मलाई निर्माणात्मकवादी कामकोटमा प्रवेश गर्न थाले, 32 आदेशहरू सिकाउँदै तपाईंले घरको योजनाहरू विकास गर्न सक्नुहुनेछ; अन्तिम जटिल पहलुहरू जस्तै कागज स्पेस र 3D प्रतिपादन जस्ता छोडेर। अन्ततः यो दोहोरो दोहोर्याएपछि विद्यार्थीहरूले AutoCAD प्रयोग गर्न सिके र मैले सिक्न कसरी सिक्न सकेन कि कसरी मान्छे सिक्छन, न त यो सिकाइन्छ मानिसहरू किन सिक्छन्.
यसमध्ये केहि समावेश छ, पोडियम हटाउन र स्वीकार गर्दछ कि विद्यार्थी ज्ञानको मालिक हो जसमा नयाँ ज्ञान निर्माण गर्ने। विद्यार्थीहरूको अघिल्लो ज्ञानको आधारमा, यो निर्देशित गरिएको छ कि विद्यार्थीहरूलाई नयाँ र महत्वपूर्ण ज्ञान निर्माण गर्ने प्रबन्ध, उनीहरूको आफ्नै सिकाइको मुख्य अभिनेता हुन -यद्यपि यसो भन्दै यो एकदम सजिलो छ-.
तर यो यति हो; मानिसहरू सिक्दछन् किनभने तिनीहरू उत्पादकता र प्रगति पाउँछन् किनकि तिनीहरूले प्राप्त गरेका छन्। तिनीहरू जान्दछन् किनकि उनीहरूलाई यो थाहा पाउँछ कि नयाँ जानकारी माछा मार्ने माछा छ। तिनीहरू जान्दछन् किनकि निजीकृत शिक्षा बिना, व्यक्तिगत चासो चल्दैन।
कसरी शिक्षण-प्रक्रिया प्रक्रियाहरू विकसित हुन्छन्
मानिसहरू बुझ्ने मिश्रणमा एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्तहरू मध्ये एक हो जसले अब जानकारी उमेर समावेश गर्दछ। पेसा गरे नगरी डिजिटल पत्रकार तिनीहरूले सामाजिक सञ्जाल मा अड्केको खर्च किनभने उनीहरू एक लोकप्रिय ब्लग छ किनभने, परम्परागत व्यक्तिहरूलाई भन्दा बढी पाठकहरूलाई छ, तर कारण अनुभव गरेको छ तिनीहरूलाई मान्छे पाठकहरूलाई को जनता बुझ्छु।
शिक्षण क्षेत्रमा, त्यस्तै केहि पनि क्रमशः हुन्छ। समय कसरी AutoCAD सिक्नको लागि पुस्तक बेच्न आउनेछ एक निराशाजनक व्यवसाय हुनेछ, किनकि इन्टरनेटले पढ्नको लागि पर्याप्त सूचना बिस्तारिरहेको छ। शिक्षकों को चुनौती ज्ञान को कुशल प्रबंधन को लागि रिक्त स्थानहरु को लागि शिक्षण समुदाय को प्रवास मा, जानकारी कसरि च्यानल जान्न हुनेछ; चुनौती निस्सन्देह कि सजिलो हुनेछैन।
त्यो व्यक्ति YouTube मा भिडीयो मार्फत स्वत: सीडी जान्छ जुन पारंपरिक कुर्सीमा अवस्थित थिएनन्, तर यस सन्दर्भमा अनुकूलन गर्न कुनै विकल्प छैन। डेमोक्रेटिस ज्ञान एक जोखिम छ, तर जब यो भयो भने संसारमा महत्वपूर्ण विद्रोहहरू छन्। यो हेर्नको लागि एक को हुनेछ जुन कुरा "सूचना उमेर" भनिन्छ।
अन्तमा, परिणाम जसले खुल्लातालाई जानकारी दिन्छ जुन अब डिजिटल मिडियाको गठन हो जुन एक लेनदेन मील का पत्थर हुनेछ जुन अहिले हामी थाहा छैनौँ। तर निस्सन्देह त्यहाँ एक मांग हुनेछ र मान्छेहरुलाई बुझ्न आवश्यक छ कि शिक्षालाई नेतृत्व गर्ने उपकरणहरू, प्रविधिहरू र बढ्दो ग्लोबल सन्दर्भहरूका लागि अनुकूल मोडेल।
अन्तिम सिफारिश आधारभूत र सरल छ; तपाईं अनलिना गर्न सिक्नु पर्छ। हामीले उत्परिवर्ती कौशलहरू प्राप्त गर्न हदसम्म, हामी परिवर्तनहरू अनुकूलन गर्न नसक्ने मात्र नतिजा पाउन सक्नेछौं, तर हाम्रो उद्देश्यले अझ धेरै निश्चितताको साथमा। ज्ञानको आधारभूत रूपमा लोकतान्त्रिककरणको रूपमा उदाहरणीय हुनुहोस्।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो नयाँ gvSIG २.० संस्करणले के भन्छ
अर्को पोस्ट MundoGEO # कनेक्ट २०१ 2013, सबै तयार छअर्को »